5 Njem Mgbasa Ozi Njem Branddị Mkpa Gị Kwesịrị Adogbaso | Martech Zone
Saturday, July 25, 2015 Saturday, July 25, 2015 Douglas Karr
Lemara Amụma Njem Ndị njem malitere saịtị na March nke 2015 nke mere ka mmụba 12% site na ngwaọrụ mkpanaka / mbadamba n'ime izu abụọ mbụ, mmụba 3% na ntanetị na ntanetị na 140% abawanye na ntanetị. Ha mezuru nke a site na ọdịnaya nke usoro saịtị ahụ nke ọma, onyonyo siri ike yana usoro ntinye akwụkwọ dị mfe - na-abanye na ọnọdụ dijitalụ na ndị njem.
Iji meziwanye njem mkpanaka maka ebe nrụọrụ weebụ ya, mụbaa ntụgharị ma nyefee ahụmịhe ọhụụ dị mma kwekọrọ n'ụkpụrụ okomoko nke ụlọ ọrụ ahụ, Celebrity Cruises rụrụ ọrụ na ndị na-eweta ahụmịhe ahịa ndị ahịa. SDL na dijitalụ consultancy Mgbochi Mgbidi.
Brandsdị njem ụwa ga-egbo mkpa nke ndị njem na ndị ọbịa ma na mmadụ ma n'ịntanetị, n'oge na n'ọtụtụ asụsụ. Nke a pụtara ịhụ na enweghi ahụmịhe, ahụmịhe na-agbanwe agbanwe gafee ọwa na mmekọrịta. Iji mezuo nke a, ndị na-ere ahịa ga-agbanwe usoro ha dị ka omume ndị ahịa na mmasị na-agbanwe, na-eburu ọnọdụ njem dijitalụ ise a n'uche. Paige O'Neill, CMO, SDL
Travellọ ọrụ njem zuru ụwa ọnụ na-eche ihu ugbu a ihe ịma aka pụrụ iche nke igbo mkpa nke ndị njem ma n'onwe ya na ịntanetị, na ezigbo oge na gafere ọtụtụ asụsụ. Iji ruo na karịa ndị njem chọrọ, ụdị ga-azụlite ụzọ dị mfe site na ịghọta usoro njem 5 ndị ​​na-esonụ nke na-akpụpụta ọdịnihu nke ahụmịhe dijitalụ.
Dị njem 5 na-ahazi Ọdịnihu nke Ahụmahụ Dijitalụ
Nkwalite mmekọrịta - Ndị njem juu anaghị ekwu okwu ma na-ekwupụta n ’ịntanetị na-ekwughi okwu. Ha na-eji ngwa dijitalụ, ọ dịghịzị mkpa ijide mmadụ aka
Nhazi dabere na mmasị - Ndị njem karịrị akarị bụ nhọrọ ịntanetị. Ndị na-ere ahịa ga-anapụta ozi ndị ezubere iche, nke ahaziri nye ndị njem na-eji data ma dozie CX ka mma
Ihe Nleba Anya nke Dijitalụ - Anya bụ asụsụ ọhụrụ nke oge dijitalụ. Ndị ahịa na-eji echiche ndị ọzọ akpọrọ ihe karịa ahịa ọ bụla na-ekwu
Mbibi Ekwentị - Uber na AirBnB bụ ihe atụ nke ndị ọgba aghara ghọrọ usoro ọrụ mmekọrịta.
Ọrụ Onwe Onye Dijital - Taa, 39% nke Millennials na-ebute njem ha site na metasearch karịa ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem n'ịntanetị (OTAs) ma ọ bụ igodo saịtị dị ka ndị nchọpụta dijitalụ si eme. Ndị na-eme njem ga-eche n'echiche gafere ndepụta njegharị na ihe dị mkpa iji kparịta ụka na ọdịbendị ọdịnala iji nyefee atụmanya ndị njem ụwa.
Jul 28, 2015 na 4:55 PM
Ndewo, nnukwu edemede, daalụ!
Kedu ihe ị chere bụ ihe atọ kachasị mkpa maka ngwa ntinye akwụkwọ njem ọhụụ taa?